Bogga ugu weyn Lacag ka sameynta Nadex: 15 Talooyin ugu Fiican Sida ay u Shaqeyso 2021
Isha sawirka: nadex.com
Lacag ka sameynta Nadex uma fududa sida ay u dhawaaqdo. Dhab ahaantii, waa mid ka mid ah meheradaha ganacsiga ugu adag ee la heli karo. Kaliya kuwa leh aqoonta saxda ah ee xeeladaha saxda ah ayaa awood u leh inay macaash sameeyaan.
Intaa waxaa sii dheer, si aad macaash uga hesho binary -gaaga, waa inaad si buuxda u fahamtaa sida ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ahi u shaqeeyaan, suuqyada iyo jadwalka waqtiga aad ku ganacsan karto, iyo faa'iidooyinkooda.
Nadex waxaa lagu yaqaanay inuu yahay hormuudka bixiyaha ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee Mareykanka. Waxaa loogu talagalay inay kuu oggolaato inaad la kulanto dareenka ama ka ganacsiga suuq la nidaamiyay oo leh heerar go'an oo halis ah.
Maqaalkan, waxaad ku baran doontaa wax walba oo ku saabsan Nadex, ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee ganacsiga, iyo sida aad lacag uga samaysan karto masraxa.
Waa maxay Nadex?
Nadex, oo hore loogu yiqiinay Hedge Street, waa nidaam isweydaarsiga ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee onlaynka ah ee fadhigiisu yahay Mareykanka. Waxay bixisaa ka ganacsiga tafaariiqda ee ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah waxayna ku faaftaa badeecadaha Forex ee sida aadka ah looga ganacsado iyo suuqyada tusmooyinka saamiyada.
Waa isweydaarsiga ugu horreeya ee Mareykanka ee ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah, faafinta wicitaannada, iyo garaacidda, oo bixisa habab sugan oo hal-abuur leh oo looga qaybgalo suuqa.
Iyada oo ku saleysan Chicago, Nadex waxay qayb ka tahay qaybta Waqooyiga Ameerika ee Kooxda IG (LON: IGG), FTSE 250 shirkad adeeg maaliyadeed oo caalami ah oo leh xaraf weyn oo suuq ah qiyaastii $ 3.75 bilyan (laga bilaabo Oktoobar 2020).
Adigoo ah xubin Nadex ah, waxaad ka ganacsan kartaa suuqyo badan waxaadna heli kartaa taxane socda oo ah fursado ganacsi oo gaagaaban. In ka badan 10,000 oo saacad, maalin kasta, iyo qandaraasyo toddobaadle ah ayaa lagu kala iibsanayaa shan maalmood toddobaadkii mashiinnada iyo aaladaha guurguura.
Nadex waa isweydaarsiga maaliyadeed ee nidaamsan. Taas micnaheedu waa in ay isbarbar dhigaan kuwa wax iibsada iyo kuwa wax iibiya, oo aysan jagooyin ka qaadan suuqyada.
Guud ahaan, Nadex waxaa nidaamiya Guddiga Ganacsiga Badeecadaha Mustaqbalka (CFTC), lacagaha xubnahana waxaa lagu hayaa akoonno kala -gooni ah bangiyada waaweyn ee Mareykanka.
QODOBKA LA XIRIIR: Dib -u -eegista Xeerka Quantum 2021: Ma u qalantaa mise khiyaano cusub oo Ganacsi Labaad?
Sidee buu Nadex u shaqeeyaa?
Ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee Nadex ayaa si dhakhso leh u noqonaya doorashada kaliya ee ikhtiyaarrada ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee Mareykanka.
Badanaa sababtoo ah xulashooyinka ikhtiyaariga ah ee Nadex waxay ku shaqeeyaan habka 0-100. Taas macnaheedu waa marka aad iibsato ikhtiyaar, qiimaheedu wuxuu ahaan doonaa inta u dhaxaysa $ 0 iyo $ 100 taas oo ku xidhan qiimaha hantida hoose.
Waa tan sida ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ay uga shaqeeyaan Nadex.
Waxaa jira saddex qodob oo muhiim ah oo ka kooban heshiiska ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah.
Suuqa hoose. Tan waxaa loola jeedaa suuqa aad dooratay inaad ka ganacsato. Nadex waxay bixisaa forex, indices stock, badeecadaha, iyo dhacdooyinka.
Qiimaha shaqo joojinta. Qiimaha shaqo joojintu wuxuu udub dhexaad u yahay habka go'aan qaadashada ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah. Si aad ganacsi u samayso, waa inaad go'aansataa haddii aad u malaynayso in suuqa hoose uu ka sarrayn doono ama ka hoosayn doono shaqo joojinta.
Taariikhda iyo waqtiga uu dhacayo. Waxaad ka ganacsan kartaa heshiisyada ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaariga ah oo soconaya illaa hal toddobaad, oo leh muddo gaaban ilaa shan daqiiqo.
Intaa waxaa sii dheer, Nadex waxay bixisaa afar suuq oo kala duwan oo aad ku qiyaasi karto qandaraasyada ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah. Waxaa ka mid ah;
Madasha Nadex waxaa loo qaabeeyey si aad u awooddo waxa qandaraasyada loo heli karo in la ganacsado wakhti kasta.
Si aad ugu tababarto ka ganacsiga Nadex, waxaa muhiim ah inaad isticmaasho xisaabaadka demo ee suuqa. Sida xaqiiqda ah, Nadex waxay bixisaa mid ka mid ah xisaabaadka demo ugu wanaagsan ee madal ganacsi uu bixin karo.
Koontada demo ayaa si buuxda loo maalgeliyaa, waligeed ma dhicin, waxayna u shaqaysaa si la mid ah sida madal-lacagta dhabta ah iyada oo aan la dhigin.
Intaa waxaa sii dheer, farqiga ugu weyn ee u dhexeeya koontada demo waa in maadaama ay tahay ganacsiga demo, qofna runtii ma iibsanayo. Marka, waxay ku qaadataa iibsi dhab ah madal toos ah si ay ganacsi uga abuurto demo.
QODOBKA LA XIRIIR: Dib -u -eegista Nidaamka Faa'iidada Guriga 2021: Sirta La Qaawiyey | Xalaal Mise Fadeexad?
Sida Loo Kala Iibsado Fursadaha Labaad
Ka ganacsiga ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah waa sida weydiinta su'aal fudud; “Suuqan ma ka sarreyn doonaa qiimahan waqtigan? Haddii aad u malaynayso haa, waad iibsanaysaa, haddaad u malaynaysidna waad iibinaysaa.
Ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah waxaa lagu qiimeeyaa inta u dhaxaysa $ 0 iyo $ 100, markaa waxaad go'aansan kartaa inta raasumaal ee aad halis gelin karto.
Qandaraas kastaa wuxuu ku tusayaa inta ugu badan ee aad heli karto iyo ugu badnaan aad waayi karto, marka had iyo jeer waa lagu wargeliyaa ka hor intaadan go'aan qaadan, khasaaruhuna ma aha mid faraha ka baxa.
Haddii ganacsigaagu guulaysto, waxaad helaysaa lacag dhan $ 100, markaa macaashkaagu wuxuu noqonayaa $ 100 oo laga jaray lacagtii aad ku bixisay furitaanka ganacsiga. Haddii ganacsigaagu aanu guulaysan, ma helaysid lacag bixin. Tani waxay ka dhigan tahay inaad lumisay raasamaalkaagii, laakiin wax kale maahan, maxaa yeelay halistaada waa la daboolay.
Haddii aad ogaato inaad doonayso inaad ka baxdo heshiis waqti hore kahor intuusan dhicin, waxaad dalban kartaa amar kale oo aad ku xirto booskaaga, xaddiddo khasaaraha ama xiridda faa'iidada.
Hoos waxaa ku yaal talooyin yar oo kaa caawinaya inaad si fiican u degto xulashooyinka ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah.
Ogow isbeddellada suuqa
Soo qaado suuqa aad rabto inaad ka ganacsato
Dooro qiimaha shaqo joojinta iyo dhicitaanka.
Sug dhicitaanka, ama xiro ganacsigaaga goor hore.
Akhri ALSO: Faallooyinka USI Tech 2021: Sidee Sharci u tahay Shirkadda Lacagta ee Crypto?
Ka ganacsiga Nadex Platform
Haddii aad rabto inaad ka bilowdo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee Nadex, halkan waxaa ah lix tallaabo oo fudud oo la raaco;
Gal madasha Nadex. Is -qoritaanku waa mid sahlan oo bilaash ah, waxaad ku heli kartaa koonto demo oo leh lacag -bixinno lacag la'aan ah. Xaqiiqdii, markaad isdiiwaangeliso, waxaad si otomaatig ah u heli doontaa $ 10,000 oo ah miisaaniyad dalwaddeed si aad u tijaabiso wadista masraxa oo aan lahayn khataraha.
Si loo ilaaliyo koontada isticmaalaha, qaar ka mid ah codsadayaasha Mareykanka iyo kuwa aan ahayn Mareykanka waxay u baahan doonaan inay xaqiijiyaan aqoonsigooda ama cinwaanka deegaanka ay deggan yihiin iyagoo diraya dukumiintiyada loo baahan yahay.
Dooro hanti. U adeegso aaladda Hantidhowraha daaqadda dhinaceeda bidix. Hantida waxaa lagu taxay fasalka hantida, hantida, iyo dhicitaanka.
Dooro dhicitaan. Ka dib markaad gujiso fasalka hantida aad dooratay iyo macluumaadka dhicitaanka hantida ayaa soo muuqan doona, guji dhammaadka bartilmaameedkaaga si aad u wacdo qiimaha shaqo joojinta ee la heli karo.
Dooro shaqo joojin. Qiimaha shaqo joojintu waxay ku qoran yihiin daaqadda weyn. Shaqo joojinta ugu badan ee la kala iibsanayo ayaa ah kuwa ugu dhow qiimaha hadda ee hantida. Gujinta qiimaha shaqo joojinta ayaa wici doonta tigidhka dalabka.
Dhis tigidhkaaga. Tigidhada dalbashada waxay ku taxan yihiin waqtiga dhicitaanka, qiimaha shaqo joojinta, qiimaha dalabka/dalabka, iyo qoto -dheeraanta suuqa. Waxaad dooranaysaa inaad iibsato/iibiso, tirada saamiyada aad ku ganacsanayso, iyo qiimaha aad diyaar u tahay inaad bixiso.
La soco ganacsigaaga. Kadib markii amarkaaga la buuxiyo, la soco ganacsigaaga. Ama waad haysan kartaa ilaa dhicitaanka oo aad hesho lacag dhammaystiran ama waad ka bixi kartaa booska (adoo iibsanaya ama iibinaya) waqti kasta oo aad rabto, si aad u yareyso khasaaraha ama aad u qabato faa'iidooyinka.
Intaa waxaa dheer, waxaad ku raaxaysataa khidmad ganacsi oo hooseysa oo hufan. Waa kan dulmar.
Entry $ 1 khidmad ganacsi heshiis kasta
Ka bax kahor dhicitaanka $ 1 khidmad ganacsi heshiis kasta
Dhimashada ganacsiga (lacagta ku jirta) $ 1 khidmadda dejinta heshiis kasta
Dhimashada ganacsiga (ka baxsan lacagta) Lacag dejin ma leh
Sidoo kale, Nadex waad ku iibsan kartaa oo iibin kartaa si aad u furto, si ka duwan qaabka EU -da oo aad ka soo iibsato wicitaan ama aad ku iibsato dhejin iyadoo ku xiran falanqayntaada.
Nadex iibsi aad ku furto micnaheedu waa waxaad tahay qof caajis ah, waa sida wicitaan. Koontadaada ayaa lagaa qaadaa, haddii aad lumiso, waxaad lumisaa qiimihii aad bixisay, haddii aad guulaysato, waxaad ku helaysaa $ 100 halkii bakhti (taas oo aan ahayn faa'ido oo dhan).
Akhri ALSO: Dib -u -eegista Xulashada IQ ee Daacadda ah 2021: Madal Ganacsi Sharci ah ama Fadeexad Forex?
Waa maxay sababta Ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah looga ganacsado Nadex
Nadex waa bixiye horseed u ah ka ganacsiga ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee Mareykanka. Waxay bixisaa ganacsi deg-deg ah, suuqyo kulul, iyo halis xadidan.
Waa tan sababta dad badani ula ganacsadaan Nadex;
#1. Nadex waa isweydaarsi nidaamsan
Nadex waxaa nidaamiya Guddiga Badeecadaha Mustaqbalka Badeecadaha (CFTC), oo ah hay'ad federaal ah oo madaxbannaan oo dusha kala socota suuqa kala -sooca Mareykanka oo doonaya inay ka hortagto dhaqamada ganacsi ee xadgudubka ah.
Tani waxay ka dhigan tahay inaad hubto inaad ku ganacsanayso goob la nidaamiyay oo leh difaac si aad uga badbaadiso wax isdaba marin iyo khiyaano.
#2. Ka bixitaanku waa sahlan yahay lacagtaadana waa la ilaaliyay
Xubnaha ka ganacsada waxaa lacagtooda lagu hayaa akoonno kala soocan bangiyada waaweyn ee Maraykanka.
Markaad xubin noqoto, lacagahaaga waxaa lagu hayn doonaa xisaabaadka BMO Harris Bank iyo Bangiga Shanaad ee Shanaad si waafaqsan xeerarka CFTC.
Intaa waxaa sii dheer, way fududahay in lacag lagala baxo koontadaada Nadex. Waxaa jira saddex siyaabood oo aad ula bixi karto lacagta caddaanka ah ee aad ku shubtay koontadaada Nadex;
Kaarka deynta - waa u bilaash dhammaan xubnaha Nadex
Ka bixitaanka ACH (wareejinta bangiga) - waa u bilaash dadka deggan Mareykanka
Wareejinta siligga ama wareejinta bangiga caalamiga ah.
#3. Khatar xaddidan, ganacsi muddo gaaban ah
Qiimaha ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah ee Nadex ayaa isbedelaya iyadoo ku saleysan itimaalka, isagoo ku siinaya fursad ka badan bixiyeyaasha kale, halkaas oo aad si fudud u saadaalin karto haddii suuqa uu sare u kacayo ama ka hooseeyo.
Waxaad dooran kartaa inaad bixiso qaddar qandaraasyo horay lacag kuugu jiray, ama aad dooran lahayd halis hoose iyo karti abaalmarin sare haddii aad u malaynayso in suuqyadu ay sii socdaan.
Waxaa jira qandaraasyo ganacsi oo soconaya ilaa shan daqiiqo oo soconaya welina waa ku habboon yihiin ganacsatada doonaya xawaare iyo xakameyn buuxda.
QODOBKA LA XIRIIR: Suuqa Lacagta vs Shahaadada dhigaalka: keebaa fiican?
Sida Lacag Looga Sameeyo Nadex
Haddii aad rabto inaad si guul leh uga ganacsato Nadex oo aad macaash ka hesho sidaad u socoto, waxaa jira talooyin ay tahay inaad shaqaaleysiiso.
Waa kuwan kuwii ugu fiicnaa
#1. Ha ku degdegin ka ganacsiga lacagta dhabta ah dhaqso
Tani waa qaladkii ugu horreeyay oo ganacsato badani sameeyaan. Waxaad u baahan tahay inaad taqaano madal ka hor intaadan si guul leh u ganacsan oo aad macaash uga hesho.
Nadex wuu fahamsan yahay muhiimadaan wuxuuna siiyaa koonto demo bilaash ah. Koontada demo waxaa si buuxda loo maalgeliyaa ilaa $ 10,000 oo lacag maaliyadeed ah wax saamayn ahna kuma laha koontadaada dhabta ah.
Waa meel aad ku tijaabin karto xeeladahaaga ganacsiga oo aad ku arki karto sida wanaagsan ee ay u shaqayso.
Fikradda guud ee koontada demo waa inay kuu diyaariso ganacsiga dhabta ah.
#2. Ha ka ganacsan hanti aad u badan
Mid ka mid ah xeerka suulka ee ganacsiga ayaa ah, ka ganacsiga kaliya waxa aad awoodi karto inaad lumiso.
Isku dayga inaad ka ganacsato hanti aad u tiro badan hal mar, gaar ahaan haddii aad isku dayeyso inaad ka ganacsato waqti-gaaban iyo/ama adeegsiga 5-daqiiqo iyo 20-daqiiqo waxay kaliya kuu horseedi doontaa inaad seegto calaamado wanaagsan oo xitaa ka sii daran, waxaad seegtaa fursadaha iibinta wanaagsan si macaash loo helo.
#3. Ha qaadan dhammaan khataraha
Had iyo jeer ha u soo bixin si aad u dhaqaaqdo weyn marka aad wax iibsaneyso. In kasta oo ay u ekaan karto qaadashada khatarahan ayaa ku gelineysa meel wanaagsan si aad u hesho soo -celinta lacagtaada, weli waxay noqon kartaa waxyeello mararka qaarkood.
#4. Isticmaalka Aad U Gaaban ee Dhamaadka
Waxay runtii noqon kartaa mid jirrabaya inaad u tagto 5 iyo 20 daqiiqo ikhtiyaarrada ganacsi ee ikhtiyaariga ah, laakiin waa inaad ogaataa inaad lumin karto hantidaada si dhakhso leh.
Tani waa sababta khubaradu kuu soo jeedinayaan inaad ku bilowdo dhicitaan waqti dheer ah. Sababtoo ah waxay ku siin doontaa waqti dheeri ah si aad u daawato waxqabadka suuqa marka qiimaynta ikhtiyaariyada ay is beddesho.
Markay qiimaha hantidu dhaqaaqdo, waxaad samayn lahayd go'aanno xog -ogaal ah. Marka, u tag dhammaadka maalinta, badhtamaha toddobaadka, iyo dhammaadka toddobaadka.
QODOBKA LA XIRIIR: Sida Loogu Sameeyo Lacag Suuqa Suuqa 2021: Tilmaan Buuxo.
#5. Ha iloobin Fidinta
Nadex, qiimayaasha oo dhan waxaa lagu bixiyaa dalab/weydiin faafin. Dalabku waa waxa dadku rabaan inay bixiyaan, weydiintu waa waxa dadku rabaan inay wax ku iibiyaan.
Haddii aad ku iibsato qiimaha suuqa waxaad ku iibsanaysaa weydiinta, sababtoo ah dalabku had iyo jeer wuu hooseeyaa, waxaad si otomaatig ah u muujin doontaa khasaare xisaabtaada, xitaa haddii ikhtiyaarku ku jiro lacagta.
Intaa waxaa sii dheer, faafitaanka ayaa isbedelaya cadaadiska suuqa, markaa waxaad u baahan tahay inaad taas ogaato.
Sidoo kale, suuq aan xasilooneyn oo dhaqso u socda, faafitaanku wuxuu noqon karaa mid aad u adag, laakiin suuq tartiib tartiib u socda, wuu ka ballaaran doonaa.
#6. Inaad Aad u “Ammaan badan tahay” Markaad dooranayso Shaqo -joojinta
Ma aqaan sida saxda ah ee ay tani kuugu ekaan karto, markaa, u qaado sidaad u aragtay. Ha noqon mid “ammaan ah” marka aad dooranayso qiimaha shaqo joojinta.
Ammaan ahaan waxaan ula jeedaa doorashada shaqo joojinta ee horeba ugu jirtay lacagta ama si qoto dheer ugu jirta lacagta oo u malaynaya inay haystaan ​​fursad sare oo lagu xiro lacagta.
Xusuusnow, haddii calaamaddaadu wanaagsan tahay, markaa ma jirto sabab aadan u gadan shaqo joojin lacag-la aan ah, kaliya ha aadin meel aad u fog.
#7. Adeegsiga Amarada Xaddidan
Xaddid-amarku wuxuu leeyahay laba ujeedo. Dhinac, waxay kaa caawin karaan inaad hesho qiimo wanaagsan marka suuqa ku dhaqaaqo adiga oo raalli ka ah waxayna dammaanad qaadi karaan khasaare haddii suuqa kaa soo horjeedo.
Khubaradu waxay kuu soo jeedinayaan inaadan marka hore isticmaalin amarrada xaddidan. Waxaad u baahan tahay inaad si dhow u fiirsato oo aad sugto calaamadahaaga ka hor intaadan gelin ganacsigaaga.
Akhri ALSO: Dib -u -eegista Imarketslive 2021: Ma sharci baa mise waa khiyaano kale oo Forex Trading
#8. Ogow suuqaaga
Si aad ugu guulaysato ganacsiga, waa inaad taqaanaa suuqaaga. Ha ku boodin ganacsiga oo ha moodin inaad ku qumman tahay.
Samee cilmi -baaris ballaaran oo ku saabsan waxa aad rabto inaad ka ganacsato, si fiican u faham suuqaaga, oo aad awooddo inaad samayso mala -awaal dhab ah oo aqoon leh dhaqdhaqaaqiisa.
#9. Ha sugin waqti dheer si aad u iibiso
Ganacsiga ma aha meesha aad ku sugayso macaashkaagu inuu uruuro waqti ka hor intaadan iibin. Haddii sicirkaagu sax yahay oo faa'ido jirto, markaa wakhtiga la iibinayo waxay ahayd shalay.
Sababtoo ah, haddii aad sugto macaashkaagu inuu kordho, waxay ku dambayn karaan inay yaraadaan, taasoo kaa dhigaysa inaad lumiso dhammaanteed.
Marka taariikhda dhicitaanku soo dhowaato, ikhtiyaaraadka ku jira lacagta ama ka baxsan lacagta ayaa lumin doona wixii macaash ah ee ay haystaan, iyo waliba qiimahooda.
Markaa, halkii aad sugi lahayd, hadda iibi.
#10. Markaad noqoto qof caajis ah, si qoto dheer u iibso lacagta
Nadex, si aad u furto ganacsi dhiiran, waxaad iibisaa si aad u furto oo aad u gaabiso hal wax badan. Waxay ku tusaysaa sida -1 koontadaada, waxaad ku iibineysaa qiimo aad u sarreeya oo aad rabto inaad ku iibsato qiimo jaban.
Khubaradu waxay soo jeedinayaan marka aad u malaynayso in qiimuhu hoos u dhici doono, oo aad hesho signal, ka dibna si qoto dheer u gal lacagta. Tani waxay siinaysaa soo laabasho weyn xagga hore waxayna leedahay fursad fiican oo lacag lagu sameeyo.
Maskaxda ku hay in marka suuqu dhaco, uu degdeg u dhaco oo ka dheeraado sidii la filayay.
#11. Ha tuurin lacag fiican xumaanta ka dib
Markaad ka ganacsanayso dhicitaanka muddada-gaaban, oo aad leedahay mid ka mid ahi xumaado, ha isku dayin inaad furto boos kale oo isla ganacsiga ah. Halkii, sug dhicitaanka, sug calaamadda xigta oo keydso lacagtaada.
#12. Diidmada Qaadashada Macaashka
Sideed u diidi kartaa faa'iidooyinka markay ku habboon tahay wejigaaga, oo aad weli rabto inaad lacag samayso? Wax macno ah ma samaynayso.
Markaad ganacsi sameyneyso, waxaa ugu wanaagsan inaad kasbato faaiido yar marka loo eego khasaare badan. Faa'iidooyin yar ayaa u kordhaya guulo waaweyn, khasaare weyn ayaa kaa tirtiri doona suuqa.
Bal qiyaas haddii aad haysato boos xiran oo muujinaya faa'iidooyin, ka dibna halkii aad urursan lahayd faa'iidooyinkaaga, waxaad go'aansataa inaad sii haysato ilaa dhicitaan, adoo rajaynaya in faa'iidadu kor u kacdo, markaa aakhirka, waxaad lumisaa faa'iidooyinka.
Adigu waad garaaci kartaa adoo adeegsanaya istiraatiijiyad ganacsi oo qaldan.
Dhinaca kale, istaraatiijiyadan oo kale waxay ka shaqayn kartaa ikhtiyaarada ganacsiga qaarkood. Si kastaba ha ahaatee, awoodda aad u leedahay inaad ogaato goorta aad shaqaalaysiinayso xeeladaha noocan oo kale ah waxay kaa dhigaysaa ganacsade wanaagsan.
QODOBKA LA XIRIIR: 8 Siyaabood Oo Lacag Loogu Sameeyo Suuqa Beerka | 2021
#13. Noqo mid dabacsan
Ha ku dhejin hal dhaqan. Noqo mid dabacsan oo suuqa u qaad sida ay timaaddo. Maalmaha qaar, waxaa laga yaabaa inaad ogaato in suuqa uu aad u dhaqaaqayo, isbedbeddelka ayaa sarreeya iyo calaamadaha ayaa ka fiican.
Maalmo kale, waxay noqon kartaa mid ka soo horjeedda oo dhammaystiran. Calaamadaha si fiican uma muuqdaan wax walbana waa gaabis.
Ogaanshaha farqiga iyo istaraatiijiyad ku habboon xaalad kasta oo suuqa ah, waxay ku dejinaysaa waddada guusha muddada-dheer.
Runtu waxay tahay in Nadex ay u adag tahay sida aaladaha kale ee ikhtiyaariga ah. Markaa ma fududa inaad lacag samaysato haddii aadan fahmin sida madalku u shaqeeyo.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan rajaynayaa in qoraalkani ku caawin doono.
Waa maxay Aagga Ganacsiga Xorta ah ee Shanghai? Saameynteeda, iyo Faa'iidooyinka, iyo Qasaarooyinka
10 Kayd ee Ganacsiga Swing Best ee 2021
Taasi waa wax xun
Maqaarka App: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato 2021
Si aad u ogaato haddii ganacsiga xorta ah uu yahay tallaabada ugu wanaagsan ee lagu heli karo dhaqaale xasilloon, waxaad u baahan tahay inaad…
15 Siyaabood Oo Loogu Heli Karo Kaararka Hadiyadaha iTunes Si Xalaal Ah Sanadka 2022
Haddii aad ku bixinayso qiime buuxa filim, hees, ama barnaamij ku yaal App Store, waxaad tahay nuugle.…
Fundrise ma xalaal baa mise waa khiyaano cusub oo hanti ma guurto ah? Eeg Dib -u -eegid Buuxda
Waxaa jira boqolaal mareegaha maalgeliya ee ku wareegsan, taasoo ka dhigaysa maalgashadayaasha mustaqbalka inay ku jahwareeraan teendhada ay dhisayaan caasimaddooda…
Waa Maxay Qaabka Ganacsiga? 35 Noocyada Moodooyinka Ganacsiga Sanadka 2022 -ka
Bilaabidda meheraddu uma sahlana sida ay u egtahay. Waxaa jira waxyaabo badan oo la tixgeliyo - goobta, istaraatiijiyadda, iyo…